ပေးလပ်(ဖ့်)... - MyLasar.com
နိုင်ငံတကာ Paylab ကွဲပြားမှုအကြောင်းလေ့လာချက် တွေက ဥရောပမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်း ဆယ်ယောက်မှာ လေးယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့လက်ရှိ အလုပ်ခွင်မှာ ကွဲပြားမှုတွေမကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကွဲပြားမှုတွေဆိုတဲ့အထဲမှာ အလုပ်ခွင်က ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ ရှုဒေါင့်တွေက ဖွဲ့စည်းမှု ပုံစံတွေပါ၀င်ပါတယ်။ Paylab က အသက်အရွယ်၊ မွေးဖွားမှု၊ ဗီဇ၊ လူမျိုး (သို့) နိုင်ငံ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု နှင့် လိင်စိတ်ခံယူချက်/အမူကျင့် စတဲ့ အမျိုးစား ၆ မျိုးကို အခြေခံကျတဲ့ကွဲပြားမှုတွေအဖြစ် အာရုံစိုက် လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရင်းတွေက အလုပ်ရဖို့အတွက် အတားအဆီးတွေအဖြစ်နဲ့ အမြဲလိုလိုရှိနေခဲ့တတ်တာပါ။ ယခုလေ့လာမှုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အဖွဲ့တွေက ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ၊ လူနည်းစုအဖွဲ့၀င်တွေနဲ့ လူမျိုး အုပ်စုတွေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကလေးငယ်တွေရဲ့မိခင်တွေ၊ အသက် ၅၅နှစ်အထက်ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ လိင်စိတ်ခံယူချက်/အမှုကျင့် ရှိသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံမှုတွေမှာ ဘယ်လို ကွာဟချက်တွေရှိမလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Paylab အချက်လက်သုသေသန စစ်တမ်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နှစ်လယ်ပိုင်းက ဥရောပနိုင်ငံ ၉ ခုမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နမူနာဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း ၂၄၉၀၁ ဦးကဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းရဲ့ ဦးတည်ချက်က အလုပ်အဖွဲ့က ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တွေမှာ ဘယ်သူတွေက အလုပ်အကိုင်စျေးကွက်မှာ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေရ တယ်၊ အလုပ်ခွင်တွေမှာ သူတို့ကိုလက်ခံနိုင်မှု နှုန်းထားစတာတွေကို အမှန်အတိုင်းပါ၀င်ဖြေဆိုစေပြီး အချက်လက် ကျကျဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
why employees who work in mixed teams have fewer prejudices. တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ
စစ်တမ်းကို ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ အလယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ (ချက်ရီပတ်ပလစ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ နဲ့ ဆိုဗာကီးယား)၊ တောင်ပိုင်းဥရောပ ဘလ်ကန်းကျွန်းတွေဖြစ်တဲ့ (ဘူဂေးရီးယား၊ ခရိုအေးရှားနဲ့ ရှောဗာနီးယား) နှင့် ဘလက်တစ် (လတ်ဗီယာနဲ့ လစ်တူနီးယား) တို့မှာ ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ပိုကြီးတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အမေများ
စစ်တမ်းတွေအရ အသက် ၅၅ နှစ်အထက်၊ ကလေးအတွက်အလုပ်ခေတ္တအနားယူပြီး အလုပ်ပြန်၀င်လာတဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးရှိတဲ့ အမေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အမြဲလိုလို ကွဲပြားမှုတွေခံစားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါတွေက လူဦးရေအချက်အလက်တွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေပြီး၊ ဒီလိုလူဦးရေက အလုပ်စျေးကွက်မှာ အများဆုံး ၀န်ထမ်းအမျိုးအစား အုပ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၄၂% နဲ့အထက် ၀န်ထမ်းတွေက ပိုပြီးအသက်ကြီးတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေနဲ့ အလုပ်မှာ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး စတဲ့ ကဏ္ဏတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့၀န်ထမ်းတွေဟာ ဒီလိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အများဆုံးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ထမ်းပမာဏရဲ့ ၃၇% ဟာ ကလေးငယ်တွေကိုပြုစု စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မိခင်တွေနဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ စားသုံးသူ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်း တွေက ၀န်ထမ်းတွေဟာ ဒီလိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အများဆုံး ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မသန်စွမ်း နှင့် LGBTI ပုဂ္ဂိုလ် များ
အလုပ်ခွင်တွေမှာ အနည်းဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ ၀န်ထမ်းအမျိုးစားကတော့ မသန်စွမ်းသူနှင့် LGBTI လို့ခံယူထားသူ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေနဲ့အလုပ်ခွင်မှာ ကြုံတွေ့ရသူတွေကတော့ ၁၃% နဲ့ ၁၂% သာ ရှိပါတယ်။
မြင်သာတဲ့ အမြဲတမ်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု ရှိသူတွေဟာ အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် လူမှုအထောက်ကူပြု၊ ပညာရေး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုးရိမ်မှုဖြေဖျောက်ရေး၀န်ထမ်းတွေအဖြစ် တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
LGBTI လူမှုအဖွဲ့၀င်တွေအဖြစ်ခံယူထားသူများကိုတော့ ဘာသာစကားလုပ်ငန်း၊ စားသုံးသူ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အနုပညာ၊ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်း၊ လူမှု၀န်ထမ်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။
ဖြေဆိုသူ ၀န်ထမ်း ၂၈% က အလုပ်ခွင်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ လုပ်ငန်း ကဏ္ဏတွေကတော့ အရည်အသွေးစွီမံခန့်ခွဲရေး၊ စကားပြန်နှင့် ဘာသာပြန်၀န်ဆောင် မှုများ၊ စားသုံးသူ၀န်ဆောင်မှု၊ ခရီးသွားနှင့် အိုင်တီ၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာ ကဏ္ဏတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀% သော၀န်ထမ်းတွေက လူနည်းစု လူမျိုးနှင့် နိုင်ငံ သားတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများ၊ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အရည်အသွေးစွီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဏ တွေမှာ ယခု၀န်ထမ်းများကိုအများဆုံးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကွဲပြားမှုကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အမှုအကျင့်တွေဟာ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ ကော်ပိုရိတ်ယဥ်ကျေးမှု ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပြီး ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ် မတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုတွေကို အသုံးချပြီး မတူညီတဲ့အလုပ်တာ၀န်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရှိနေတာက ကုမ္ပဏီအတွက် များစွာသောရွေးချယ်စရာတွေဖန်တီးပေးပြီးတော့ လူမှုအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကို ကွဲပြားတဲ့ သဘာ၀ဖြစ် ပေါ်စေပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်အတွက် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ အခန်းလေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်သလိုပါ။ အဆုံးစွန် ပြောရရင်တော့ လျော့ကျလာတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ပမာဏဟာ ကုမ္ပဏီတွေကို အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရဖို့အတွက် အကြီးမားဆုံးအတားအစီးတွေရှိနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ငှားရမ်းဖို့အတွက် တွန်းအားတွေပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုမ္ပဏီတွေဟာ အကာကွယ်လမ်းစဥ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ သင့်လျှော်ကန်တဲ့ အလုပ်အနေအထားနဲ့ အားလုံးပါ၀င်နိုင်တဲ့ အလုပ်သဘာ၀ကို ဖန်တီးလာခဲ့ပါတယ်
Read more about the real interactions at work with groups of employees who are often atadisadvantage on the job market.
အိုင်တီကဏ္ဏမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့၀န်ထမ်းတွေက အလုပ်ခွင် ကွဲပြားမှု အနည်းဆုံးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Paylab စစ်တမ်းအရ၊ အိုင်တီ ၀န်ထမ်းတွေဟာ ကွဲပြားမှုကို အနှိမ့်ဆုံးကြုံတွေ့ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်တီကဏ္ဏတွေက ဒုတိယ၀န်တမ်းတွေအားလုံးဟာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့ အချိန်အထိ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အုပ်စု ၆ ခုက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာတွေရှိမနေကြပါဘူး။ အလုပ်သဘာ၀ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အခြေခံ အားဖြင့် ကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းပညာ၀န်ထမ်း တွေဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကဏ္ဏတွေက အလုပ်ခွင်ကွဲပြားမှု (၄၄% နှင့်အထက်) မကြုံတွေ့ရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ ဓါတုဆက်စပ်လုပ်ငန်း၊ ကားလုပ်ငန်း၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေက ၀န်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအတွင်း ကွဲပြားမှုကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက် အားပေးထောက်ပံ့မှုတွေဟာ အများအားဖြင့် ထိပ်တန်းစွီမံခန့်ခွဲခန့်ခွဲသူတွေဆီကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆောင်သူရာထူးနဲ့ တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေသူတွေဟာ အလုပ်ခွင် ကွဲပြားမှုရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ထပ်တူ အကောင်းမြင်စိတ်မြင့်မားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကွဲပြားသူတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရသူတွေထဲက ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကသာ အလုပ်ခွင်မှာ ယခုလို၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ကွဲပြားမှုမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်နေရတာပါလို့ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကဏ္ဏတွေထဲက ကွဲပြားမှုတွေအတွက် တံခါးပွင့်နေတဲ့၊ ကွဲပြားမှုရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းအများစုကိုအလုပ်ခန့်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းကဏ္ဏတွေကတော့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ HR၊ အနိမ့်ပိုင်းစွီမံခန့်ခွဲခန့်ခွဲမှု၊ ခရီးသွား/ ဟိုတယ်နဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်ရှင်များက ကွဲပြားသူတွေအတွက် နေရာပိုပေးပါတယ်
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဟာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကိုအလုပ်ခွင်မှာ လမ်းဖွင့်ပေးထားကြပြီး ငါးဆကျော်ခန့် နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပိုမိုအလုပ်ခန့်ထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကတော့ ၅၅ နှစ်အထက် ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပိုပြီးနေရာပေးထားပါတယ်။ ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီကြီးကြီး တွေက၀န်ထမ်းတွေဟာ အထက်ကဖော်ပြထားတဲ့ စောင့်ကြည့်အုပ်စုတွေနဲ့အတူ ကွဲပြားမှုတွေကို ပိုမိုများပြားစွာ ကြုံတွေ့ နေကြပါတယ်။ ဒါက ကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကို ကွဲပြားမှုတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ ကော်ပိုရိတ်ယဥ်ကျေးမှု၊ စံနှုန်းတွေအတွက် လုပ်ဆောင်တာတွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
၀န်ထမ်းဆယ်ယောက်မှာ လေးယောက်ဟာ အလုပ်ခွင်အတွင်း ကွဲပြားမှုမခံစားရပါဘူး
ကွဲပြားမှုမာဏ နှုန်းထားနဲ့ ၀န်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွေဟာ နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားသလို၊ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေနဲ့လည်း ကြီးမားတဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကွဲပြားမှု အနှိမ့်ဆုံးနိုင်ငံက ဟံဂေရီနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ကွဲပြားတဲ့၀န်ထမ်းအမျိုးစားတွေနဲ့ မထိတွေ့ရပါဘူးလို့ ၄၉% ကစစ်တမ်းမှာဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံတွေက အလုပ်ခွင်မှာ ကွဲပြားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကြောင်း ပမာဏအများဆုံး စစ်တမ်းမှာဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေက မိခင်တွေနဲ့ အသက်ပိုကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အလုပ်ခန့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံဟာ မသန်စွမ်းသူတွေကို အလုပ်ခန့်ထားရာမှာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး ဖင်လန်နိုင်ငံကတော့ LGBTI လူ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အလုပ်ခန့်ထားရာမှာ ရာနှုန်းအမြင့်ဆုံးအဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Paylab ကွဲပြားမှု လေ့လာချက် ကို၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်၀က်က ဥရောပနိုင်ငံ ၉ ခုတွင်စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၂၄၉၀၁ ဦးကဖြေဆိုခဲ့သည် စစ်တမ်းရဲ့ ဦးတည်ချက်က အလုပ်အဖွဲ့က၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တွေမှာ ဘယ်သူတွေက အလုပ်အကိုင်စျေးကွက်မှာ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေရတယ်၊ အလုပ်ခွင်တွေမှာ သူတို့ကိုလက်ခံနိုင်မှု နှုန်းထားစတာတွေကို အမှန်အတိုင်းပါ၀င်ဖြေဆိုစေပြီး အချက်လက် ကျကျဖော် ထုတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုစစ်တမ်းကို ဖန်တီးဖို့အတွက် CVEK နဲ့ Slovak Academy of Sciences စတဲ့ ကွဲပြားမှု တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူ non-profit အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများမှ ပြည်တွင်း လစာ ပေါ်တယ်များက Paylab အချက်အလက် ကောက်ခံမှုနည်း လမ်းအတိုင်းကောက်ခံထားချက်များ ယခုစစ်တမ်းတွင်ပါ၀င်သည်။ ဘူဂေးရီးယား (ဖြေဆိုသူ ၂၃၅၉ ဦး)၊ ချက်နိုင်ငံ (ဖြေဆိုသူ ၂၆၇၈ ဦး)၊ ခရိုအေးရှား (ဖြေဆိုသူ ၄၆၅၁ ဦး၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ (ဖြေဆိုသူ ၄၄၉၉ ဦး)၊ ဟန်ဂေရီ (ဖြေဆိုသူ ၂၆၀၅ ဦး)၊ လဗီတာ (ဖြေဆိုသူ ၂၈၆၄ ဦး)၊ လစ်တူနီယား (ဖြေဆိုသူ ၂၆၄၀ ဦး)၊ ဆိုဗာကီယား (ဖြေဆိုသူ ၂၄၃၄ ဦး)၊ နှင့် ဆိုဗာနီယာ (ဖြေဆိုသူ ၁၁၇၁ ဦး)။